Manazava ny tafio-drivotra lehibe - Countdown ho an'ny fanjakana
MARO dia nanontany hoe: "Aiza isika eo amin'ny fandaharam-potoana misy ny hetsika eto amin'izao tontolo izao?" Ity no voalohany amin'ireo horonantsary marobe izay hanazava ny "tab by tab" izay misy antsika ao amin'ny Great Storm, ny zavatra ho avy ary ny fomba fiomanana. Amin'ity horonantsary voalohany ity dia mizara teny ara-paminaniana mahery i Mark Mallett izay niantso tsy nampoizina ho mpanompo manontolo andro amin'ny maha "mpitily" ao am-piangonana izay nitarika azy hanomana ireo rahalahiny ho an'ny Storm ankehitriny sy ho avy.
Miorina amin'ny soratra masina, ireo ray am-piangonana voalohany, ny papa ary ny fanambarana manokana tsy mitombina amin'ny fotoantsika, dia andiana "tsy maintsy jerena" ity ho anao sy ny fianakavianao. Ao amin'ny horonantsary faharoa, ny profesora Daniel O'Connor dia hiaraka amin'i Mark amin'ny andian-dahatsoratra riveting rehefa manomboka miaina ireo tranga efa nambara hatry ny ela isika… amin'ny fotoana tena izy.
Inona ilay "restrainer"? Read Fanesorana ny refrainer ao amin'ny The Now Word.
Andriambavy: Miomàna - Fizarana III
Ny Fanombohan'ny Fanovana Revolisiona
Ny tafio-drivotra mahery
Ny mason'ny rivo-doza
Ny andro lehiben'ny fahazavana
Ny fanafahana lehibe
← Luz de Maria - Fitsapana…
Fanahy Kalifornia - Maria… →